500W 350W ígwè ebike 48V/6 ...
New nwoke egwuregwu 500W 750W mot ...
LCD ngosi ala price cheap ...
500w 750w Steel ụba Sport ...
Batrị Acid nke China na -ere nnukwu ike 800w 1000w 1500w ọgba tum tum Big Tire Electric Motor Electric Scooters
Ụdị: Scooter Electric/Motor
Ihe eji eme ihe: Carbon Steel
Batrị: 60V20AH /72V20AH Leadacid batrị
Ìhè: Ìhè ihu ihu LED na ọkụ ọkụ
Breeki: breeki hydraulic diski
Agba: ahaziri (White/odo/acha anụnụ anụnụ…)
Nwoke egwuregwu ọhụrụ 500W 750W moto MTB nwere ike abụba nnukwu taya snow osimiri taya eletrik Ugwu igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe bicicletas
Ụgbọ ala ike ụgbọ ala, mmepụta dị ike
Njupụta nchekwa ike dị elu, oriri onwe onye dị ala,
Akwa arụmọrụ dị elu, enweghị egwu maka ibu dị elu
Ichebe mmiri nke igbe batrị, nwee ọ enjoyụ njem ụbọchị mmiri ozuzo
500W 350W ígwè ebike 48V/60V batrị-acid batrị batrị eletriki igwe kwụ otu ebe bicicleta.
Nnukwu ihe na -agbanwe ure mmachi
Mmetụta ujo ihu na azụ,
Enweghị ụkwụ na -ama jijiji
500w 350w Steel Ebike 48v/60v Batrị Lead-Acid Kwadoro Nnukwu igwe eletriki igwe kwụ otu ebe.
Aha: Ebike/ igwe eletriki igwe eletriki/ igwe eletrik
Motor: 350 W/500W moto azụ azụ na -enweghị ntụpọ
Batrị: 48V12AH/48V20AHLead-acid batrị
Onye njikwa: onye njikwa nwere ọgụgụ isi
Breeki: breeki nke dị n'ihu/breeki na -agbasa/breeki
China n'ogbe Aluminium alloy frame 350W 48V batrị lithium kwadoro igwe eletriki igwe kwụ otu ebe
1. Mkpọchi moto mkpọmkpọ ebe
Mkpọchi ahụ dị oke mma. Ọ dịkwa mfe igbachi ụgbọ ala iji gbochie ohi.
2. Nnukwu ụkwụ n'ihu
Obosara ụkwụ ihu adịghị agafe agafe, dị mma nke ukwuu
3. Mmiri na -agba mmiri
Ihe na -eme ka ihe na -awụ akpata oyi n'ahụ dịkwuo ntụsara ahụ ma dịkwa nchebe. Ọdịdị dị elu bụ nchụso anyị mgbe niile
Ngosipụta LCD dị ọnụ ala ọnụ ala 36V 250W egwuregwu 26inch lithium ike eletriki igwe eletriki igwe ebike MTB igwe ịnyịnya.
Nkọwa ngwaahịa Ngosipụta LCD gosipụtara ọnụ ala dị ọnụ ala 36V 250W egwuregwu 26inch lithium batrị ike eletrik igwe kwụ otu ebe MTB ugwu ịnyịnya Ụdị batrị Lithium Mountain Bike LSD-01 nha ụkwụ 26 ″ Enyemaka ọsọ ihe mmetụta ngwa ngwa ihe nchara/Aluminom alloy Batrị 38V8AH/10AH Lithium batrị sensọ Speed ​​sensọ. Mkpọchi mkpọchi ndụdụ nkwụsịtụ ihe na -agbanwe agbanwe Shock Absorber Rim ụdị Aluminom alloy Rim Gears 21 ọsọ Taya CHAOYANG 26*1.95 Light LED Display LCD Chain TEC ...
26 inch 36V8AH Lithium Batrị Bike ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị eletrik igwe kwụ otu ebe
Ọ bụ batrị 18650 m-ion nke mkpụrụ ndụ mejupụtara, yana oge ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, ogologo ndụ batrị na ụtọ njem.
Asambodo China Sgs 27ppeed Lithium Batrị Ebike Na -apịachi igwe kwụ otu ebe igwe eletrik
Aluminom alloy frame, mpịachi akụkụ adịghị nchara.
Uche nwere oghere, dị mma ma na -eku ume.
Aluminom alloy ihe, mara mma na mmesapụ aka.
Ọhụrụ na -ere ọkụ 14 inch 36V 250W aluminom alloy frame lithium batrị mini obodo eletriki igwe
Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, igwe kwụ otu ebe eletrik na -ejikọ uru nke mpịachi igwe kwụ otu ebe na nke igwe eletriki eletrik. E-bike kacha mma maka gị ga-ekpebi site na mkpa nke gị; ókè ị na -agba, ka ịgba ọsọ ahụ dị larịị ma ọ bụ ugwu, yana ego ole ịchọrọ imefu.
20 Inch Cool 4.0 Fat Taya Na -apịaji Aluminom Alloy Frame Ike Dị Ike 48v 500w Batrị Lithium eletriki igwe igwe igwe.
Bicycle na -apịaji bụ ịnyịnya ígwè emebere ka ọ daba n'ụdị kọmpat, na -eme ka njem na nchekwa dị mfe. Mgbe a na-apịachi, enwere ike ibuga anyịnya ndị ahụ ngwa ngwa n'ime ụlọ, n'ụgbọ njem ọha (na-eme ka njem na-aga nke ọma na njem ịnyịnya ígwè), yana ịchekwa ya n'ụzọ dị mfe na obere ebe obibi ma ọ bụ n'ụgbọ ala, ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ elu.
Obere 14 ″ Na -apịgharị igwe kwụ otu ebe/obere ịkpụgharị igwe kwụ otu ebe maka ọrịre/ịdị arọ Aluminom Alloy Frame Folding Ebike Bicicleta Plegable
E-BIKE na-apịachi bụ ụzọ na-enweghị nsogbu iji nweta gburugburu.
EGWU EBIKE SMART ị nwere ike iburu ebe ọ bụla, oge ọ bụla, si n'ụgbọ njem ọha ruo azụ ụgbọ ala.
China N'ogbe Maka okenye Aluminom Alloy Frame Horn Handle 14speed Oem 700c*28c Racing Cycling Road Bike Bicycle.
Ụba: Aluminom Alloy
Ndụdụ: Aluminium Alloy mkpọchi ndụdụ
Ogwe aka: Alloy Alloy
Ihe eji eme ya: Aluminom Alloy
Leverị breeki: Ya na Derailleur, Shimano
Chain Wheel: Alloy Alloy
Ogwe etiti: kaa akara
Hub Front & Rear: Hapụ Alloy Aluminom ngwa ngwa
Rim: Rim Aluminom okpukpu abụọ